Xiddigaha Ugu Muhiimsan Barcelona Oo Iska Diiday Mushahar Dhimis Cusub Oo Joan Laporta Ka Dalbaday - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaXiddigaha Ugu Muhiimsan Barcelona Oo Iska Diiday Mushahar Dhimis Cusub Oo Joan Laporta Ka Dalbaday
Xiddigaha Ugu Muhiimsan Barcelona Oo Iska Diiday Mushahar Dhimis Cusub Oo Joan Laporta Ka Dalbaday
July 3, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Ciyaartoyda waaweyn ee Barcelona ayaa iska diiday codsi uga yimid madaxweynaha kooxdaas ee Joan Laporta kaas oo doonayay in mar kale ay ciyaaryahannadu ku noqdaan go’aankoodii hore oo ay mushahar dhimis kale sameeyaan.
Barcelona oo ka cabanaysa dhaqaale xumo ayaa waxay u meel raadinaysaa sidii ay u dhimi lahayd mushaharkeeda oo laga doonayo inay ka saarto lacag ku dhow 200 milyan oo Euro ka hor inta aanu bilaabmin xilli ciyaareedka cusub.
Xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi oo uu heshiiskiisii Barcelona dhamaaday saddex maalmood ka hor, xorna ka noqday kooxdaas ayuu Laporta rajo ka qabaa inuu qandaraas cusub ka saxeexi doono, laakiin haddii uu saxeexa Messi ku guuleysto, waxa laga doonayaa in mushaharka ciyaartoyga ee sannadlaha ah ay hoos u dhigaan 200 milyan oo Euro.
Si ay Messi usii haysan karaan, Laporta ayaa ciyaaryahannada kooxda waxa uu ka dalbaday in ay mushaharkooda dhimaan ku dhowaad kala-badh inta xaaladda dhaqaale ee kooxdu ay soo kacayso, isla markaana ay u gaadhi karaan khadka cas ee La Liga u jeexay ee ah in aanay mushaharkoodu ka badanin.
Laakiin waxa soo gaadhay jug weyn, waxaana codsigan cusub iska diiday ciyaaryahannada kooxda oo u sheegay in aanay mar kale mushahar dhimis samayn karaynin.
Sida uu sheegay wariye Victor Navarro, tiro ciyaartoyda waaweyn ee Barcelona ah ayaa iska diiday dalabka madaxweynahooda, waxaanay u sheegeen in ‘wixii la saxeexay, ay saxeexan yihiin.’
Barcelona ayaa ku jirta xaalad xun oo dhaqaale waxaana lagu leeyahay deyn kor u dhaaftay $1 bilyan oo dollar, sida ay qortay majaladda Forbes ee dhaqaalaha wax ka qorta.